के नागा र सामन्था डिभोर्स गर्दैछन् ? - नागरिक रैबार
के नागा र सामन्था डिभोर्स गर्दैछन् ?
विगत केही दिनदेखि भारतीय मिडियामा साउथका सुपरस्टार जोडी नागा चैतन्य र सामन्था अक्किनेनीको बिच डिभोर्सको चर्चा चलिरहेको छ । उनीहरुले, डिभोर्स गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
मिडियाका अनुसार, ३ महिनाभित्र उनीहरुविच डिभोर्स हुनेछ र सामन्थार्लाइ अलग भएपछि गुजारा भत्ता स्वरुप ५० करोड मिल्ने उल्लेख छ ।
तर, यो बिषयमा सामाजिक संजालमा शुभचिन्तकले सोधेको प्रश्नमा सामन्थाले जावफ दिएकी छिन् । डिभोर्सपछि सामन्था हैदराबादबाट मुम्बई सिफ्ट हुन लागेको खबर समेत सार्वजनिक भएको छ । डिभोर्स र मुम्बई सिफ्ट हुन लागेको बिषयमा सामन्थाले लेखेकी छिन्–‘यस्ता किसिमका सयौं गलत खबर कहाँबाट उडिरहेको छ मलाई केही पनि थाहा छैन । म मुम्बई सिफ्ट हुन लागेको खबर गलत हो । हैदराबाद मेरो घर हो र म यही नै रहनेछु । हैदराबादले मलाई सबै कुरा दिएको छ । यसैले, यहाँ म खुशीले बस्न सक्छु ।’
केही समय अगाडि पत्नी सामन्थासँग डिभोर्सको बिषयमा नागा चैतन्यले जवाफ दिदै यस्ता खालका खबरले असर पर्ने उल्लेख गरेका थिए । उनले, आफूले करिअरको सुरुवातदेखि नै व्यक्तिगत र व्यवसायिक जीवनलाई फरक तरिकाले हेरेको भन्दै यी सबै कुरालाई निरन्तरता दिने बताएका छन् ।
सन् २०१७ मा गोवामा नागा र सामन्थाले बिहे गरेका थिए । उनीहरुको बिहेमा १० करोड खर्च भएको थियो ।